ဧရာဝတီတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နှင့် အင်တာဗျူး - Delta News Agency
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ မြို့နယ်အလိုက် ပျံ့ကျဲနေတဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကို စုစည်းနိုင်ဖို့ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ စစ်သင်တန်းတက်ရောက်ပြီးသူတချို့ဦးဆောင်ကာ ဧရာဝတီတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကို ဇွန်လ ၆ရက်နေ့မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဧရာဝတီPDFဟာ အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့ အပေါင်းအပါတွေရဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာမှုအားလုံးကို ပြင်းထန်စွာ အရေးယူတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းလုပ်ဆောင်ထားလဲဆိုတာကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းက ပြည်သူတွေရှင်းလင်းစွာ သိနိုင်ဖို့ Delta News Agency က ဧရာဝတီတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ Facebook Page မှာဖော်ပြထားတဲ့ Emailကိုပေးပို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
DNA ။ ။ ဧရာဝတီတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ ဧရာဝတီဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ဟာ တူညီပါသလား?
PDF ။ ။ PDFနဲ့ AFA မတူညီပါဘူးခင်ဗျာ၊ PDF ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ဆိုတာကို AFAကိုလဲ အကြောင်းကြားထားပါတယ်
DNA ။ ။ NUGရဲ့ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှုကိုရော ရရှိပြီးပြီလား?
PDF ။ ။ NUGရဲ့ အသိအမှတ်ပြုခွင့်ရရှိဖို့ တင်သွင်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။
DNA ။ ။ မြို့နယ်အလိုက်ဖွဲ့ထားတဲ့ PDFတွေဟာ ဒေသတွင်းကတက်ကြွလူငယ်တွေများနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ် အစ်ကိုတို့အဖွဲ့ကရော?
PDF ။ ။ ဧရာဝတီတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှာ လက်ရှိ ယာယီဥက္ကဌတာဝန်ယူထားတဲ့ ဥက္ကဌဟာ KNU တပ်မဟာ(၆) သင်တန်းဆင်းပါ။ လက်ရှိမှာအခြားမြို့နယ်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။
DNA။ ။ ဘာ့ကြောင့်ဖွဲ့စည်းတာလဲ?
PDF ။ ။ ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ မြို့နယ်အလိုက် PDFတွေကို တစ်စုတစ်စည်းထဲဆွေးနွေးပြီး တစ်နေရာဖိရင် တခြားနေရာတွေမှာ ကြွလို့ရအောင် သို့တည်းမဟုတ် အချိတ်ဆက်မိမိလှုပ်ရှားလို့ရအောင် ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။
DNA ။ ။ ဧရာဝတီတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ?
PDF ။ ။ နံပါတ်(၁)ကတော့ ဧရာဝတီတိုင်းရှိ ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်၊အိုးအိမ်၊စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်ပေးဖို့၊ နံပါတ်(၂)က ဖက်ဆစ်အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးဖို့၊ နံပါတ်(၃)ကတော့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့ပါ။
DNA ။ ။ ဖြည့်စွက်ဖြေကြားလိုတာများ ဖြေကြားပေးပါဦး?
PDF ။ ။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းမှာ ပြန့်ကြဲပြီး အချိတ်အဆက်မရှိဖြစ်နေတဲ့ PDFတွေကို စုစုစည်းစည်းတိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ဖွဲ့စည်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
DNA ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Tags: PDF ဧရာဝတီတိုင်း